မောင်အောင်မွန် ● ကြည်အေး – MoeMaKa Burmese News & Media
December 17, 2018 December 17, 2018 Aung Htet
(မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊ ၂ဝ၁၈
ငယ်နာမည် ကြည်ကြည် ကွယ်လွန်ချိန် နာမည် ကြည်ကြည်တင်မြင့်၊ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ရွေးထားသည့် ကလောင်အမည် ကြည်အေးဟုသာ ကျွန်တော်ရေးသားပါမည်။ ထို့ပြင် ကြည်အေးဘဝထက် ကြည်အေး၏စာကိုသာ အဓိကထားမှာကိုး။
အောက်တိုဘာလ (၂၄) ရက်နေ့ လက်ထပ်ပြီး၊ ရှမ်းပြည်သို့ Honeymoon ပျားရည်စမ်းထွက်ပြီး ကျွန်တော်ပြန်လာစအချိန်၊ ဆရာထင်လင်းက မိတ်ဆက်ပေး၏။ ကျွန်တော်လည်း ဝမ်းသာအားရနှင့် ကလောမှာ သူ့စာတွေဖတ်ကြောင်း ပြောပြလိုက် ရာ ကိုအောင်မွန်ရယ် Honeymoon ထွက်ချိန်မှာများ ကြည်အေးဝတ္ထု ဖတ်ရတယ်လို့ဟု ရယ်ပြီးပြောသည်။
အပျော်ဆုံးအချိန်မှာ အကြိုက်ဆုံးစာ ဖတ်တာလေ။
ကျွန်တော့်ဖြေပုံကို ကြည်အေးနှင့် အားလုံးသဘောကျသွားကြ၏။
အမှန်မတော့ ၁၉၅၃ ခု၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်မှ ကြည်အေးဝတ္ထုတွေ စဖတ်ဖူး၏။
မီကိုဖတ်ပြီး ကြိုက်၏။ နွမ်းလျအိမ်ပြန်ထဲက တင်မေဘဝ အဖြစ်ဆိုးအောင် ဖြစ်စေသည့် အဖေဆိုး အမေဆိုးကို သရုပ်ဖော် ရေးရဲပုံ အံ့သြကြရသည်။ နောက်တော့ ရှုမဝမဂ္ဂဇင်းထဲမှာပင် ဖုန်းသက်တိုင် ဝတ္ထုရှည်ပါလာရာ တက္ကသိုလ်လောကတွင် အ တော်ဂယက်ရိုက်သွား၏။
ကျွန်တော်တို့ခေတ်က တက္ကသိုလ်နယ်မြေဝယ် ရသစာပေ ထွန်းကားသီးပွင့်၍ စာတိုပေစရေးကြ ကလောင်သွေးကြသူတွေ ကလည်း များပါဘိ။ နိုင်ငံရေး အတွေးအမြင်နှင့် စာပေရောစပ်ကြသူတွေလည်းရှိ၏။
ကြည်အေး၏စာများသည် ပြည်သူအတွက်မဟုတ်ဟုဆိုသံများလည်း ကြားရ၏။
ကျွန်တော်လည်း ဝတ္ထုတိုများရေးသားရင်း မောင်အောင်မွန်ဖြစ်လာပြီ။
စာပေလောကထဲ နေရာယူထားသူ စာရေးဆရာကြီးအချို့က ကြည်အေးကိုမကြိုက်ကြ၊
ကြည်အေးလို စာဖတ်အားကောင်း၊ အတွေးပြတ် အရေးရဲကြသူတွေမှ မဟုတ်ကြပဲကိုး။
စာအုပ်တွေကို အိပ်ရမှန်းမသိ၊ စားရမှန်းမသိနဲ့ စာဖတ်တာဟာ ကျွန်မရဲ့ဘဝမှာ အသက်ရှင်ဖို့စားရ၊ သောက်ရ၊ လေရှူရသလို မရှိမဖြစ်တဲ့ အာဟာရဖြစ်သွားတယ်ဟု ကြည်အေးကိုယ်တိုင်ရေးဖူး၏။ သခင်ဘသောင်း၏ ပန်းသာမစာအုကို အခါ (၁ဝဝ) နီးပါးဖတ်ဖူးသူ ကြည်အေးလေ။
စစ်ကြီးဖြစ်တော့ (၁၁) နှစ်အရွယ် ၃ တန်းနှင့် ကျောင်းထွက်ခဲ့ရ။ ကုလားကျောင်းဆရာကြီး K.K. Mitra က အခမဲ့ လက် ဖက်ရည်တိုက်၊ ဘစ်စကစ် သစ်သီးယိုသုပ်ကျွေးပြီး သင်ပေးလို့ Golden Treasury ထဲက ကဗျာတွေ အလွတ်ရ၊ စကားပြေ ပြန်ရေးတတ်နေသူ ကြည်အေး ၁၉၆၂-၆၃ ခု၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာဋ္ဌနမှာ နည်းပြဆရာမဖြစ်လာချိန် အဲဒီ Golden Treasury ကို B.A. တန်း ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်အဖြစ် မြင်လိုက်ရပေမည်။
အဲ ဒါကြည်အေးပါ။ မကြိုက်နိုင်သူများ အားကျသူများ အသီးသီးရှိကြနိုင်ပါ၏။
ကွန်မြူနစ် သူ့အစ်ကိုကြီးအား ချစ်ကြည်ညိုသူ (၁၃) နှစ်သမီး ကြည်အေးက ကားလ်မတ်နှင့် အိန်ဂျယ်တို့၏ စာအုပ်များဖတ်၏၊ သို့သော် နားမလည်ဟုရေးဖူးရာ၊ ကျွန်တော်လက်ဝဲကျောင်းသားဘဝ ကားလ်မတ်၏ Capital စီပွားရေးကျမ်းကြီး Dictionary အားကိုးနှင့် ကြိုးစားဖတ်ရာ ဘာမှနားမလည်၊ ဂျွမ်းထိုးမှောက်ခုန် ဖြစ်ခဲ့ရပုံ ပြန်တွေးမိသည်။
၁၉၅ဝ ခုလွန်နှစ်များတုန်းက ကဗျာရွတ်ခြင်း မထွန်းကားသေးပါ။
သို့သော်လည်း ကြည်အေး၏ ကဗျာတပိုင်းတစဖြစ်သော …
ဘဝတိုတို လျှောက်ချင်သတဲ့ … ကို သီချင်းလို တနှုတ်၌ ရေပန်းစားနေကြသည်။
ဖုန်းသက်တိုင်ထဲက မေမေစိန်က ကြည်အေးဆိုလျှင် အဲ့ .. ကိုဖုန်းခင် မည်သူနည်း။
စာရေးဆရာပေါက်စ ကျွန်တော်တို့တတွေ ကြည်အေးကို အလွန်အမင်းသဘောကျနေပုံဟန်ဆောင်ရန် အကြောင်းမမြင်၊ အဘယ့်ကြောင့် ဖုန်းကွယ်နေရပါမည်နည်း။
ထို့ကြောင့် ၁၉၆၁ ခု၊ လန်ဒန် BBC မှာ တနှစ်လုပ်ပြီး ကြည်အေးပြန်လာရာ အစ်ကိုသန်းဆွေက ကျွန်တော့်အား မောင်ရင့် ကိုးကွယ်ရှင်မပြန်လာပြီဟု ပြောပြဖူး၏။
၁၉၇၂ ခု၊ဒီဇင်ဘာလက အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ရောက်လာပြီး ရုန်းကန်ရင်း ချီကာဂိုမြို့တွင် အလုပ်သင်ဆရာဝန်၊ နယူးယောက် မှာ စိတ်ရောဂါလေ့လာ၊ ၁၉၈၆-၈၈ ကျတော့ စင်စင်နတီတက္ကသိုလ်၌ အပျို လူပျိုတို့၊ မိသားစုဆိုင်ရာ စိတ်ရောဂါများ အထူး ကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် ကထိကဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ဆို၏။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများတွင် သွားလုပ်ပြီးနောက် ၂ဝဝ၁ ခု၊ ၌ အနားယူကာ ကြည်အေးသည် အမေရိကန်မှာ စာရေးနေသည်။
၁၉၉၅ ခု၊ အောက်တိုဘာလတွင် VOA မြန်မာပိုင်း၌ အလုပ်ရ၍ ကျွန်တော် Washington DC သုိ့ရောက်လာ၏။
စင်စင်နတီတက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှ စိတ်ရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်မလေးသည် ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းသမီး၊ သည်လိုနှင့် တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်ရ၍ ကြည်အေးနှင့် ဆက်သွယ်မိပြီ။ မောင်အောင်မွန်ကိုမသိ၊ မမှတ်မိ၊ ကိစ္စမရှိ။ ကျမပညာသည် ဝတ္ထုထဲက လူပြက်နာမည် ကိုပဏ္ဍဂစ်ဟုဆိုလက်သောအခါ အံ့သြဝမ်းသာသွားပြီး အန်တီ့စာတွေသိပ်ကြိုက်တာပဲလို့သာ ပြောနေကြ တာ၊ ဖတ်ဖူးကြပုံမပေါ်ဘူးဟု ကြည်အေးကပြောသည်။ ထိုအခါအခြားဝတ္ထုတွေထဲက ကျွန်တော်အများကြီး ပြောလိုက် သည်။
အဘယ် စာရေးဆရာသည် သူ့စာတွေထိုသို့ မှတ်နေသည်ကို မနှစ်သက်ပဲ နေပါမည်နည်း။
လိုလိုလားလားရှိသမို့ မကြာခဏ ကြည်အေးထံ မကြာခဏ ဖုန်းဆက်စကားပြောကြရာ တနာရီမက ကြာချင်ကြာတတ်၏။ သားငယ်နှင့် နေနေကြောင်း၊ စိုက်ခင်းခြံလည်းရှိကြောင်း၊ လာလည်စေချင်ကြောင်း ဖိတ်သည်။ ခွင့်ရက်မရှိ၍ ကျွန်တော် မသွားဖြစ်။ နယူးယောက်က သမီးထံသွားသည့်အခါ လာတွေ့ပါဟုလည်း ကြည်အေးကပြောသည်။
ဆရာရင်း တက်တိုး၊ မင်းသုဝဏ်၊ နုယဉ်၊ ဦးခင်မောင်လတ်၊ ခင်မျိုးချစ်၊ ထင်လင်း၊ ဒဂုန်တာရာ စသူတို့မှတပါး အခြားစာရေး ဆရာများနှင့် ဆုံဖူးခြင်းသိပ်မရှိလှ၊ ရှုမဝဦးကျော်ကိုပင် (၂) ကြိမ်သာမြင်ဖူးသတဲ့။ အခင်မင်ဆုံးက သန်းဆွေ၊ သူကသာ မိမိရေးသောစာများ မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေပို့ပေး၊ ပါလာလျှင် စာအုပ်နှင့်စာမူခ ယူလာပေးပုံပြောပြသည်။
လွတ်လပ်ခွင့်ကို အလွန်အမင်း ခုံမင်နှစ်သက်သောကြည်အေးသည် ၁၉၆၂ ခု၊ အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရလက်အောက် မြန်မာ ပြည်တွင် ဆက်နေရန်မဖြစ်နိုင်၊ နိုင်ငံခြားသွားရောက် နေထိုင်နိုင်ရန် အင်္ဂလိပ်စာတော်ရုံလောက်နှင့် မလုံလောက်။ ထို့ ကြောင့် 3rd MB နှင့်ထွက်ခဲ့ရသော ဆေးသိပ္ပံတွင်ပြန်တက်၏။
၁၉၇ဝခု၊ တွင် MBBS ဘွဲ့ရ၊ ဆရာဝန်ဖြစ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ လုပ်ခဲ့စသဖြင့် စနစ်တကျပြင်ဆင်ခဲ့၏။
မှန်၏မှောင်ရိပ် စိုးနှင့်ခိုင်၊ မှန်၏မှောင်ရိပ် အိမ်ဖြူလင်းသစ် စာအုပ်(၂) အုပ်ဖတ်ပြီး ဆွေးနွေးပေးပါ၊ စာအုပ်တွေ စာတိုက်ကနေ ပို့ပေးမယ်၊ ပြီးတော့ ပြန်ပို့ပေးပါတဲ့။ မပို့ပါနဲ့ဟုဆိုကာ မြန်မာပြည်သို့ လှမ်းမှာ၍ ကျွန်တော်ရ၏။ ဖတ်ကြည့်၏။ မြန်မာစာဖတ်သူ တို့အတွက် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ Controversial ဖြစ်ပါမည်။
သူကုသခဲ့ရသော မောင်နှမ (၂) ယောက်၊ အဖေက ဝရမ်းပြေး ရာဇဝတ်ကောင်၊ သူတို့လို (၁၆) နှစ်အရွယ်တွေနှင့် အရက် သောက်၊ ဆေးခြေက်ရှူ ညဉ့်နက်အောင်ကကြရင်း တည မောင်နှမ (၂) ယောက် မူးမူးရူးရူးနှင့် မှားယွင်းကြ၏၊ အင်္ဂလိပ်လို ပီသစွာရေးသားနိုင်ပါမည်။ မဖုံးမကွယ် ဖွင့်ဟဝန်ခံသည့် စိတ်ရောဂါလူနာ၏စကားများကို မြန်မာလိုရေးသား၍ မဖြစ်နိုင်စိတ် ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ရေးသားဟု ကြည်အေးက အမှာစာရေးသားသည်။
ကျွန်တော်ဖတ်ပြီး စိတ်မပါ၍ မဆွေးနွေးဖြစ်။
ကြည်အေး နိုင်ငံခြားသို့ထွက်သွားပြီးနောက် ရေးသားပေးပို့သော ကဗျာများဖတ်ရ၏။ ဝတ္ထုတိုများ မတွေ့ရ၊ နောက်တော့ မောင်၊ ကိုကိုနှင့် မြနန္ဒာ ဝတ္ထုရှည်၊ ခု လုံးချင်း ၂ အုပ်တွဲ။
နယူးယောက်၌နေသောကျွန်တော့် တူတော်မောင်ကလည်း ကြည်အေးပရိသတ်မို့ သူလိုက်ပို့မည်ဟုဆို၍ အဆင်ပြေချိန် စောင့်ရင်း ထုံစံအတိုင်း တယ်လီဖုန်းဆက် စကားပြောဖြစ်ကြ၏။ ဝတ္ထု ကဗျာအကြောင်းဆို ပြောလို့ဆွေးနွေးနိုင်ပါ၏။ သူ လေ့လာနေသည့် ဘာသာရေးအကြောင်းကိုတော့ ကျွန်တော်လိုက်မမီ။
ကြည်အေးက Serious ဖြစ် အဆင့်မြင့်လွန်းသကိုး။
ကြည်အေး၏ကဗျာများ စာအုပ်ပအကြိမ်ထွက်လာတော့ ဝမ်းသာအားရဖြစ်မှု ရေပွက်ပမာဆိုသလို ခဏသာခံ၏။ အမှားတွေ များလွန်းလို့ပါ။ ဒုအကြိမ်ကျတော့မှ သန့်စင်သွားပြီး ကြည်အေးအမှာကိုပါ ဖတ်ကြရသည်။ မြန်မာပြည်မှ ကာရံမဲ့ကဗျာကိစ္စ အပါဝင် ကြည်အေးသဘောထာအမြင် Interview ရှည်ကြီး RFA မှ ဦးသိန်းထိုက်ဦး (ကဗျာဆရာ ထိုက်သူနိုင်) ထုတ်လွှင့် ပေး၍၊ မြန်မာပြည် ပြန်လို့မဖြစ်ရရှာ သူ့ဘဝ ရင်တွင်းပူဆွေးသံ ကြားလိုက်ကြရ၏။
ကဗျာဆရာမ စမ်းစမ်းတင်ကမူ ကြည်အေးဘဝတွင်း ပို၍ထဲထဲဝင်ဝင်ရှိ၏။
စောစောပိုင်းကတည်းက လေးနက်ရှိုင်းသော ကဗျာများရေးသူ ကြည်အေးသည် တရားအနှစ်သာရ (ဓမ္မကဗျာဟု ခေါ်ရ မလား မပြောတတ်) ရေးသားလာသည်။ ကျွန်မ အခု စာကဗျာပြန်ရေးနေသည်မှာ အရင်းခံ တိုက်တွန်းရုံမက လက်ရေးမူက စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အထိ စီမံပြုလုပ်းပေးတဲ့ ကျွန်မထက်များစွာငယ်တဲ့ Cynthia San San Tin ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကျေးဇူးကြီး မားတာကို အသိအမှတ်ပြုပါရစေဟု ကြည်အေးကိုတိုင် ပွင့်ဒင်္ဂ စာအုပ်အမှာ၌ ရေးသားထားပါသည်။ ပွင့်ဒင်္ဂစာအုပ်အမှာ၌ ကိုအောင်မွန်သို့ ဓမ္မလက်ဆောင် ကြည်အေးဟု လက်မှတ်ထိုးပို့ပေး၏။
သော်တာဆွေ၏ မတော်မရားရေးခြင်းခံကြရသော ဒဂုန်တာရာ၊ ဗန်းမော်တင်အောင်၊ တင့်တယ်၊ ကြည်အေး စသဖြင့် ကျွန် တော်တို့ ကြားဖူးဖတ်ဖူးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသူများအနက် ကြည်အေး၏ ရှင်းလင်းချေပချက် နှင်းဆီဖြူဂျာနယ်၌ ပါလာကြောင်း ကြားရ၍ ဖတ်ချင်လှသော်လည်း အဝေးမှာမို့ ကျွန်တော်လက်လှမ်းမမီ။
ဖတ်ပြီးချင်း နယူးယောက်သို့ တယ်လီဖုန်းဆက်ကာ ကြည်အေးနှင့် စကားပြောဖြစ်၊ ဆွေးနွေးဖြစ်ကြ အမြင်ချင်းဖလှယ်ကြ၏။ တရားပြည့်ဝသူ သို့သော် ပုတုဇဉ်လူသား၏ ခံစာချက်၊ အဆင့်မြင့်ဝါရင့် စိတ်ရောဂါအထူးကု သမားတော်ကြီးအနေနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ်ထားပုံကား အံ့ဖွယ်ပါကလား။
သည်လိုနှင့်ပင် စာပေလောကအကြောင်း၊ စာရေးဆရာများအကြောင်းကနေ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြောကြားချင်သော ကြည်အေးဝတ္ထုများသို့ ပြန်ရောက်ခွင့်ရလိုက်လေပြီ။ ကြည်အေးက သူ့ထံလာလည်ရန် ဖိတ်ကြားချင်း အကြောင်းရင်းမှာ ထိုင်စကားပြောကြ၊ လိုအပ်ပါက စာအုပ်စင်က စာအုပ်ရွေးထုတ်ကြည့်ကြ စသည့်အခွင့်အရေး များကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
မောင်အောင်မွန်ကို ကြည်အေးခင်မင်ရခြင်းမှာ ကာယကံရှင် ကြည်အေးကိုယ်တိုင်မေ့နေပြီဖြစ်သော ဝတ္ထုထဲက အသုံး အနှုန်းများကို ကျွန်တော်ကမှတ်မိနေ၏။ ယခုလို အဆင်ပြေနေခိုက် နှစ် (၆ဝ) ခန့် ရင်တွင်းအောင်းနေသော မေးခွန်းခေါင်းထဲ ဝင်လာလေပြီ။
ဖုန်းသက်တိုင်ထဲ ကိုဖုန်းခင် မည်သူနည်း။
မေးဖို့သင့် မသင့် ချိန်ဆရင်း အချိန်တွေကြာခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော်လက်ဝယ် ကြည်အေးစာအုပ်တွေ အစုံနီးပါး၊ ဝတ္ထုတိုစုများဆို နှစ်စုံတောင်ရှိသည်။ သို့သော် ဖုန်းသက်တိုင်မရှိ။ ကြည်အေးမှာလည်းမရှိ။ ကံကောင်းချင်တော့ ၂ဝ၁၆ ခု၊ နိုဝင်ဘာလ ဆန်းတွင် စိတ်ကူးချိုချိုတိုက်ထုတ် ဖုန်းသက်တိုင် ကြည်အေးရ၊ ကျွန်တော်ထံသို့ ကိုဝင်းကိုကို ပို့ပေး၍ ရောက်လာပြီ။
ချက်ချင်း အငမ်းမရ ထိုင်ဖတ်လိုက်၏။
ဒုတိယအကြိမ် အေးအေးဆေးဆေးဖတ် ဆွေးနွေးလိုသော အချက်အလက်များကို High Light လုပ်မှတ်သားနေကြောင်း ပြောပြတော့ ကြည်းအေးက သူလည်းဖတ်ပြီး ဝမ်းသာစွာစောင့်နေမည်ဟုဆို၏။
တယ်လီဖုန်းဆက်တော့ ပြန်မထူးပါ၊ နိုင်ဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့စွဲနှင့် စာတိုလေးရယ် စာအုပ်တအုပ်ရယ် ကျွန်တော့်ထံ စာတိုက်ကရောက်လာ၏။
ဆေးရုံတက်နေရဟုဆို၍ အမြန်ဆုံးနေပြန်ကောင်းရန် အကောင်းဆုံး စာသားပါသည့် ဆုတောင်းကပ် ရွေးပြီး–လက်ရေးနှင့် မြန်မာလို ထပ်ဖြည့်ကာ ပို့လိုက်၏။ ဆေးရုံပေါ်၌ ကြည်အေးဖတ်ရပေမည်။
ကြည်အေးစာချစ်ကြသူများလည်း ထိုသတင်းကြားရ၍ ဝိုင်းဆုတောင်းကြ၏။
Social Media ၏ အထိရောက်ဆုံး Face Book ပေါ်၌ အများကြီးတွေ့ရသည်။ နိုင်ဝင်ဘာ (၂၆) ရက်၌ မောင်အောင်မွန်လည်း အကြိုက်ဆုံး ကြည်အေး၏ ခေါ်ထူးထမ်း သရုပ်ဖော်ပုံပါကဗျာနှင့် Face Book ကနေ ပါဝင်ခဲ့၏။ မိသားစုကလွဲပြီး အခြေအနေ မှန်ကို သိနိုင်သူကတော့ ကဗျာဆရာမ စမ်းစမ်းတင်ပါ။ ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းသော်လည်း မပြည့်။
ဒီဇင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့တွင် RFA မှ Cynthia San San Tin က ကြည်အေးကွယ်လွန်သွားပြီဟု ကြေကွဲဆို့နင့်သံနှင့်် ကျွန်ထော့်ထံ တယ်လီဖုန်းဆက်၏။ RFA နှင့် VOA မြန်မာပိုင်းတို့ကနေ Interview တိုလေးနှင့် ကြည်အေးအား မောင် အောင်မွန် ကန်တော့လိုက်ရသည်။
ကြည်အေး ဖုန်းသက်တိုင် ပြန်ဖတ်ဖြစ်လေစ၊ ကိုဖုန်းခင် ဘယ်သူလဲမမေးလိုက်ရ၊ ကိုဖုန်းခင်အသုဘ၌ မေမေစိန် ယပ်တောင် ကိုင်လိုက်ပို့သလို ကြည်အေး၏ နောက်ဆုံးခရီးကို မောင်အောင်မွန် လိုက်မပို့ရ။ BBC, New York Time တို့ကလည်း ကြည်အေးအား ဂုဏ်ပြုကြသည်။ ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာတို့၏ အဆိုအမိန့်တို့ ကဗျည်းထိုးစမြဲပင်။
ကြည်အေးက လူကောင်းဖြစ်ချင်ရင် တရားကောင်းကို လေ့လာရသလို၊ စာကောင်း ကဗျာကောင်း ရေးချင်ရင် စာကောင်း ကဗျာကောင်း များများဖတ်ကြဟု မှာခဲ့ပုံ တွေးမိကြောင်းပါ။
၂ဝ၁၈ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့
← စာရေးဆရာ မောင်မောင်စိုးသို့ မိုးမခ၏ ဖြေရှင်းတောင်းပန်စာ
စိုးနောင် (မုံရွာ) ● ရန်ကုန်ရောက်စ →
July 13, 2016 Aung Htet
May 31, 2014 Aung Htet